I-China Braid Hydraulic Hose SAE100R 1AT mveliso kunye nabathengisi | INKOKHELI-FLEX
Steel wire qhina fracturing Hose
Intsimbi yocingo lwe-Hydraulic Hydraulic Hose
Ifayibha eQinisekisiweyo ngesanti kubunzulu baphantsi Hose
Ubushushu Resistant Oil Hose
Ingcinezelo High ngerabha Hose for Ukuhlamba imoto (super lingonakali)
Uxinzelelo oluphezulu lweRabha yokuHamba kweMoto (ukungonakali kakhulu)
Uxinzelelo lweeRubber zoMoya
Ubushushu High Steel Resistant Wire aluka Steam Hose
Icompact Pilot Hose
Irabha esingxotyeni isinxibelelanisi
Qhina fracturing Hose SAE100R 1AT
Qhina fracturing Hose SAE100R 2AT
Braid fracturing Hose EN857 1SC
Braid fracturing Hose EN857 2SC
Ukonakala Hydraulic Hose EN856 4SH
Ukonakala ngesanti kubunzulu baphantsi Hose EN856 4SP
Isixhobo seHydraulic Hose SAE100R13
Isixhobo seHydraulic Hose SAE100R15
Ububanzi begama I-ID (mm) WD mm OD WP
(max) (MPA) Ubungqina BP Min. BP Linganisa
mm intshi imiz ubuninzi imiz ubuninzi ubuninzi imiz imiz imiz
Indawo yokuQala: Qingdao, China
Inombolo yemodeli: ICompact Pilot Hose PLT enzulu
Umbala womgangatho: EMNYAMA, EMFUTSHANE, BOMVU, NGOMNTU
Isiqinisekiso: ISO9001: 2015; TS16949; ISO14001: 2015; I-OHSAS18001: 2017
Igama lebrand: I-OEM Brand kunye ne-Leadflex
Uhlobo lo shishino: Manufacturer
Isembozo: Smooth & Wapped
1 Iindidi zamathumbu
Iindidi ezine zamathumbu zichaziwe:
- Uhlobo lwe-1ST - i-hoses enebhanti enye yokuqiniswa kwecingo;
- Chwetheza ii-2ST- iihoses ezineebhondi ezimbini zokomeleza ucingo;
- Iindidi ze-1SN kunye ne-2SN - Iindidi ze-1SN kunye ne-2SN ziya kubakho ulwakhiwo olufanayo lokuqiniswa njengeentlobo 1ST kunye ne-2ST.
Ngaphandle kokuba baya kuba nesigqubuthelo esincinci esenzelwe ukuhlangana kunye nezinto ezingafunekiyo ukususwa kwekhava okanye isahlulo seqweqwe.
2.Izixhobo kunye nolwakhiwo
Amathumbu aya kubandakanya ioyile kunye ne-aynthetic yerabha engafakwanga manzi, ilitha enye okanye ezimbini zocingo lwensimbi oluqinileyo kunye neoyile kunye nemozulu ekhusela irabha.
2.2 Iindibano zombhobho
Iindibano zombhobho ziya kwenziwa kuphela kunye nezixhobo zombhobho ezinokusebenza kwazo okuqinisekisiweyo kuzo zonke iimvavanyo ngokungqinelana nalo mgangatho waseYurophu.
3.1 Iimfuno zeHydrostatic
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 1402, olona xinzelelo lusebenzayo, uxinzelelo lobungqina kunye noxinzelelo lokugqabhuka kwemibhobho kunye neendibano zombhobho ziya kuthobela amaxabiso anikwe kwitheyibhile 1.
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 1402, utshintsho kubude bombhobho koxinzelelo oluphezulu lokusebenza aluyi kudlula + 2% ukuya -4%.
Ubuncinane bend bend radius
Xa igobile kumda omncinci wokugoba onikwe kwitheyibhile 2 elinganiswe ngaphakathi kwigophe, ubungqingqwa abuyi kudlula kwi-10% yobubanzi bangaphandle bokuqala.
Linganisa umbhobho ongaphandle ngobubanzi nge-caliper ngaphambi kokugoba umbhobho. Gobisa umbhobho kwi-radius encinci yokulinganisa kwaye ulinganise ukucaba kunye ne-caliper.
3.3Iimpulse iimfuneko zovavanyo
A. Uvavanyo lokuqhubela phambili luya kuhambelana ne-ISO6803, Uvavanyo lokuphinda lube luvavanyo luya kuba yi-100 ℃.
B. Ngohlobo lwe-1ST kunye ne-1SN hoses, xa kuvavanywa kuxinzelelo lwempembelelo elingana ne-125% yoxinzelelo oluphezulu olusebenzayo kwii-hoses ze-nominal bore 25 kunye nencinci, nakwi-100% yoxinzelelo oluphezulu lokusebenza lwe-bore bore 31 nangaphezulu, ithumbu iya kumelana ubuncinci be-150,000 yemijikelezo yokuqhutywa yempembelelo.
Uhlobo lwe-2ST kunye ne-2SN hoses, xa kuvavanywa uxinzelelo lwempembelelo elingana ne-133% yoxinzelelo oluphezulu lokusebenza, umbhobho uya kumelana nobuncinci be-200,000 yemijikelezo yokuphembelela.
Akuyi kubakho kuvuza okanye ukungasebenzi kakuhle ngaphambi kokufikelela kwinani elichaziweyo lemijikelezo.
Olu vavanyo luya kuthathwa njengolu vavanyo olonakalisayo kwaye isiqwenga sovavanyo siya kulahlwa kude.
3.4 Ukuvuza kweendibano zombhobho
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 1402, ngekhe kubekho ukuvuza kobungqina bokungaphumeleli. Olu vavanyo luya kuthathwa njengolu vavanyo olonakalisayo kwaye isiqwenga sovavanyo siya kulahlwa kude.
Xa kuvavanywa ngokungqinelana nendlela B ye-EN 24672 kubushushu be -40 ℃ ngekhe kubekhona ukuqhekeka komphetho okanye ikhava. Isiqwenga sovavanyo asivuzi okanye siqhekeke xa siphantsi kovavanyo loxinzelelo lobungqina emva kokuphinda ufumane ubushushu obushushu.
3.6Ukudibana phakathi kwamacandelo
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN 28033, ukunamathela phakathi kwethayile kunye nokuqiniswa, naphakathi kwekhava kunye nokomeleza akuyi kuba ngaphantsi kwe-2,5 KN / m.
Iziqwenga zovavanyo ziya kuba luhlobo lwe-5 lining kunye nokomeleza kunye nohlobo 2 okanye udidi 6 lokugubungela kunye nokomeleza njengoko kuchaziwe kwitafile 1 OF en 28033: 1993.
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 7233, imibhobho yethumbu kunye nemibutho iya kuthobela amaxabiso anikwe kwitafile 3.
Kwiintlobo zamathumbu 1ST kunye ne-2ST, xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 6945, ngamandla athe nkqo (50 ± 0.5) N, i-los yobunzima emva kwemijikelezo engama-2 000 ayinakuba nkulu kune-1
Kwiintlobo zamathumbu 1SN kunye ne-2SN, xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 6945 ngamandla athe nkqo (25 ± 0.5) N, ilahleko yobunzima emva kwemijikelezo engama-2 000 ayiyi kuba nkulu kune-0.5g.
3.10 Iziqwenga zovavanyo
Uvavanyo lokuchasana nolwelo luya kwenziwa kwiimakhishithi ezibunjiweyo zelinen kunye nokugubungela ikhompawundi, ubuncinci be-2 mm ubuncinci, bokunyanga okulinganayo kurhulumente.
Ukuxhathisa okungamanzi okususelwa emanzini
Egqithileyo Qhina fracturing Hose SAE100R 2AT
Ingcinezelo High Car Ukuhlamba Hose (super abra ...
Ingcinezelo High Car Ukuhlamba Hose (super lingonakali r ...
Indawo yoShishino yaseChangyang, kwisiXeko saseLaixi, kwisiXeko saseQingdao
Bhalisela iNcwadana yeendaba